LGBT သည် မိန်းမချင်းစုံမက်သူ (Lesbian), ယောကျာ်းချင်းစုံမက်သူ (Gay), လိင်စုံဆက်ဆံသူ (Bisexual) နှင့် လိင်ပြောင်းလဲ ရပ်တည်သူ (Tansgender) တို့ကို ကိုယ်စားပြုသော အတိုကောက်စာလုံးများ ဖြစ်ပြီး လိင်ကွဲဆက်ဆံသူ (Heterosexual) နှင့်အတူပင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လိင်တိမ်းညွှတ်မှု သို့မဟုတ် ဖို/မ သရုပ်သကန်ကို ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသော ဝေါဟာရသတ်မှတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့ကို သည့်ထက်အသေးစိတ်ဆိုရလျှင် မိန်းမချင်းစုံမက်သူ (Lesbian) သည် ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအရ၊ လိင်စုံမက်မှုအရ၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုအရ အခြားမိန်းမတစ်ဦးအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားသည့် မိန်းမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ယောကျာ်းချင်းစုံမက်သူ (Gay) သည်လည်း ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအရ၊ လိင်စုံမက်မှုအရ၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု အရအခြားယောကျာ်းတစ်ဦးအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ယောကျာ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။
လိင်စုံဆက်ဆံသူ (Bisexual) သည်ကား ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအရ၊ လိင်စုံမက်မှုအရ၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုအရ မိမိနှင့်လိင်တူသူရော၊ လိင်မတူသူကိုပါ စိတ်ပါဝင် စားသည့် လူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လိင်ပြောင်းလဲရပ်တည်သူ(Bisexual) မှာမူ ယင်းတို့၏ မွေးရာပါလိင် အမျိုးအစားနှင့် ကွဲပြားသော ဖို/မ သရုပ်သကန် (ဖို ဖြစ်မှု၊ မ ဖြစ်မှု သို့မဟုတ် လိင်စုံ မဟုတ်မှုတို့၏ စိတ်တွင်းခံစားချက်)နှင့် လိင်အမျိုးအစားအသွင်အပြင်ကို ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည့် ပေါင်းရုံးဝေါဟာ ရပင်ဖြစ်ပေသည်။
LGBT ၏ အနံအလျား
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များ အလယ်ပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်သုံးနှုန်းခဲ့သော LGBT အသိုက်အဝန်းကို ရည်ညွှန်းသည့် ဂေး(Gay) ဟူသည့် ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းကို အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့သော LGBT ကို လိုက် လျောညီ ထွေပြင်ဆင်ကာ ဤ LGBT အတိုကောက် ဝေါဟာရကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကပင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ LGBT အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအနေဖြင့်ဂေးအသိုက်အဝန်း (gay community) ဆိုသော အသုံးအနှုန်းမှာ ယင်းကရည်ညွှန်းသည့် သူများအားလုံးကို အတိအကျကိုယ်စားမပြုဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။
သို့ဖြင့် ဤ LGBT အတိုကောက်အသုံးအနှုန်းကို လိင်မှုရေးရာနှင့် ဖို/မ သရုပ်သကန်တို့ အကျုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများအား အမည်တပ်ရာတွင် သုံးစွဲရန်ပေါင်းရုံးဝေါဟာရတစ်ခုအဖြစ် ပင်မရေစီးဝေါဟာရနယ်တွင်း သို့ ထည့်သွင်းခဲ့လေသည်။ စင်စစ်တွင် LGBT အတိုကောက်စကားလုံးမှာ ဖို/မ လက္ခဏာနှင့် လိင်သရုပ်သကန် အခြေပြုယဉ်ကျေးမှုများ၏ စုံလင်ကွဲပြားမှုကို အလေးပေးဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်သည့် စကားလုံးပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရကား လိင်ကွဲဆက်ဆံသူမဟုတ်သော တစ်စုံတစ်ဦးအား ရည်ညွှန်းရန်အတွက် မချင်းစုံမက်သူ၊ ဖိုချင်း စုံမက်သူ၊ လိင်စုံဆက်ဆံသူ သို့မဟုတ် လိင် ပြောင်းလဲရပ်တည်သူများဟူ၍ သီးခြားစကားလုံးများ သုံးစွဲရည်ညွှန်း မည့်အစား ဤစကားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပေသည်။
LBGT မတိုင်မီနှင့် နောက်ဆက်တွဲစကားလုံးများ
လိင်တူဆက်ဆံသူ (အထူးသဖြင့်အမျိုးသား)များကို ရည်ညွှန်းရန် အစပထမတွင် အကျယ်တစ်ပြန့်သုံးစွဲ ခဲ့သော စကားလုံးမှာ Homosexual ဖြစ်ပြီး ယင်းတွင် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အပျက်သဘော ဂယက်အနက်များ ပါဝင်နေသည်ဟုဆိုကာ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များနှင့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Homophile ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့ကြပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် gay ဟူသောစကားလုံးသို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲလာခဲ့ကြပြန်သည်။ ဤ gay အသုံးအနှုန်းကို လိင်တူဆက်ဆံသူအသိုက်အဝန်းက အတည်ပြုလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း တွင် Lars Ullerstam ဆိုသူက လူဖြူမဟုတ်သူများအတွက် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု (Ethnic Minority)ဟူသော ဝေါဟာရသုံးစွဲသည့်နည်းတူ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစု (Sexual Minority) ဟူသော ဝေါဟာရကို သုံးစွဲခဲ့ဖူး ကြောင်း သိရှိရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် မချင်းစုံမက်သူ (Lesbian) မဝါဒီ များက ယင်းတို့၏ ဖို/ မ ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍအား ပိုမိုမြှင့်တင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီး ဂေးယောကျာ်းများကြီးစိုးရေးဝါဒကို လက်မခံပယ်ချကာ ဂေးမိန်းမဟူသောသတ်မှတ် ချက်ဘောင်တွင်းမှထွက်၍ Lesbian ဟူသော ဝေါဟာရကို သီးခြားသတ်မှတ်စေခဲ့သည်။ ထို့အတူ လိင်စုံဆက်ဆံ သူ (Bisexual) များနှင့် လိင်ပြောင်းရပ်တည်သူ (Transgender) တို့ကလည်း ယင်းတို့၏ သီးခြားလက္ခဏာ ဖို/မ သရုပ်သကန်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစု အသိုက်အဝန်းအတွင်း အသိအမှတ်ပြုခံရအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရာ LGBT ဝေါဟာရမှာ တရားဝင်အကျယ်တစ်ပြန့် သုံးစွဲခြင်းခံလာရလေတော့သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များနောက်ပိုင်းတွင် ဤ LGBT အသိုက်အဝန်းကြီးထဲမှပင် အုပ်စုခွဲများပေါ်ပေါက်လာပြီး ယင်းတို့၏ သီးခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှု ဖို/ မ သရုပ်သကန်နှင့် အသွင်အပြင်များအလိုက် ကိုယ်စားပြု စားလုံးများ ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ခံရရေး လှုပ်ရှားသူများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြန်သည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများထဲမှပင် ‘Intersex’ များက ယင်းတို့ကိုယ်စားပြု အတိုကောက်စာလုံး ‘ I’ ကို LGBT တွင် ထပ်မံဖြည့် စွက်ပေးစေလိုကြပြီး ‘Queer’ တို့ကလည်း ယင်းတို့ ကိုယ်စားပြုအတိုကောက်စာလုံး ‘Q’ ကို LGBT တွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးစေလိုကြပြန်သည်။ သို့နှင့် LGBTI နှင့် LGBTQ ဟူသည့် မူကွဲအတိုကောက်စာလုံးများ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာလေသည်။ ထို့ထက်မက ‘Asexual’ ဟူသည့် လိင်မှုကင်းသူများပင် LGBT တွင် ထပ်မံ ပေါင်းစည်းလာလိုကြရာ ‘LGBTQIA’ ဟူသော အတိုကောက်ဝေါဟာရတစ်ခု တိုးချဲ့ဖြည့်စွက်ရမလိုရှိတော့ သည်။ ဤသည်မှာ လိင်မှုဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှု၊ ဖို/မ သရုပ်သကန်နှင့် အသွင်အပြင်များအရ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံနေရသော လိင်လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှား မှုများသာဖြစ်သည်။ သို့တစေ LBGT ကိုသာ ဘုံသုံးအဖြစ် အသုံးများပြီး LBGTI ကိုမှု ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (UNDP), ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) နှင့် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty International) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံသုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) ၏အဆိုအရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် လူများ သည် ယင်းတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်သူ၊ ယင်းတို့ကြည့်မြင်ပုံ နှင့် ယင်းတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်သည်ဆိုသောအကြောင်းများ ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှု၊ မညီမျှမှု၊ ရံဖန် ရံခါ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုနှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကိုပင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း သိရသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ဖို/မ ဆိုင်ရာသရုပ်သကန်များ မှာ လူသားများ၏ ခွဲခြား၍ မရသော လက္ခဏာသွင်ပြင် များသာဖြစ်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် မတရားပြုမှု များကို မည်သည့်အခါမျှ မခံစားရစေသင့်ဟု HRW က ရပ်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် LGBT များ၏ အခွင့်အရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း၊ ဖို/မ ဆိုင်ရာ သရုပ်သကန်ပေါင်းစုံနှင့် အရေးအရာပေါင်းစုံ ကို ကိုယ်စားပြုသည့် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ နှင့်လည်း အတူလုပ်ဆောင်နေကြောင်း အတိအလင်းကြေညာသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ သေဒဏ်စီရင်မှု၊ မတရားဥပဒေများအောက်မှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု၊ မညီမမျှပြုမှုဆက်ဆံမှု၊ ဆင်ဆာပြုလုပ်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလွဲသုံးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ် အကိုင်နှင့် နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ ကလေးသူငယ်များအပေါ် မတရားပြုမူမှု၊ မိသားစုအခွင့်အရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြု ခံရရေးကို ငြင်းပယ်မှုတို့အပါအဝင် လိင်မှုဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ဖို/မ သရုပ်သကန်များအပေါ် အခြေခံသော အလွဲသုံးမှုများကို စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ကာ ဖော်ထုတ်ခွင့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည်။
အလားတူ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Ammesty International AI) ကလည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၁၉ အရ လူတိုင်း၏ လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် လူတိုင်းက သူတို့ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ချစ်ခင်စုံမက် ကြောင်း ဂုဏ်ယူဝငြွ့်ကားစွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ရှိသင့်သည်ဟု ရပ်ခံတင်ပြသည်။ ထို့ပြင် လိင်တူဆက်ဆံမှု အပေါ် ရွံရှာမုန်းတီးခြင်းနှင့် လိင်ပြောင်း ရပ်တည်သူများအပေါ် မနှစ်သက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့အား နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ်ပစ်လိုက်လျှင် အသက်များ၊ ဘဝများကို ကယ်တင်ရာကျမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆော်သြသည်။ LGBTI ဆန့်ကျင်ရေးထိပါးနှောင့်ယှက်မှုက ြွူွှှု ဟု အမှတ်သညာပြုထားသူများအပေါ် ရုပ်ခန္ဓာ အရရော၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရပါ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခံစားရစေကြောင်း၊ လူတိုင်းတွင် ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လုံခြုံစွာ နေထိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ရပ်တည်ပြောဆိုသည်။ ထို့ပြင် LGBTI များမှာ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအရ ဘေးဖယ်ခံထား ရသောကြောင့် ယင်းတို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ဖို/မ သရုပ်သကန်ကို မကြည့်ဘဲ လူအားလုံး ပိုမိုပါဝင် စေမည့် ဥပဒေများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းက ယင်းတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နေမှုထိုင်ခင်းနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများကို ရရှိစေရန် ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း တွက်ချက်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် AI အနေဖြင့် ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း LGBTI များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်သွားရန် သံဓိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်း၊ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းရှိ အစိုးရများနှင့် အခြားအထင်ကရ ခေါင်းဆောင်များအားလည်း လူအားလုံးအပေါ် ယင်းတို့၏ လိင်မှု ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု သို့မဟုတ် ဖို/မ သရုပ် သကန်ကို ပဓာနမထားဘဲ ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေး မည့် ဥပဒေများတိုးတက်ကောင်းမွန် အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်တို့ကို အကြံပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) နှင့် UNDP တို့ကလည်း နိုင်ငံစုံတွင် LGBTI များလုပ်ငန်း ခွင်အတွင်း ပေါင်းစည်းပါဝင်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု၊ ဖို/မ ဆိုင်ရာ သရုပ်သကန်နှင့် အသွင် အပြင်အပေါ်အခြေခံသော ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ပပျောက်ရေးအတွက် စစ်တမ်းများကောက်ယူကာ အသုံးတည့်မည့် အကြံပေးချက်များကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း LGBT တို့၏အခြေအနေ
LGBT အခွင့်အရေးများမှာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်မှုများရှိခဲ့သည်ဆို သော်လည်း ကမ္ဘာ့အစိတ်အပိုင်းတချို့တွင်သာ ဖြစ်သည်။ နေရာအများအပြားတွင်မူ LGBTI များမှာ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခံနေရဆဲ၊ နှိပ်ကွပ်ခံနေရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အရေ အတွက်များပြားလှသော နိုင်ငံများတွင် လိင်တူဆက်ဆံမှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်မှာ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် သေဒဏ် အထိပင် ကျခံနေရသည်။
အီကွယ်ဒက်(စ) (Equaldes) ခေါ် LGBTI အခွင့်အရေးဝက်(ဘ)ဆိုက်တစ်ခု၏ အဆိုအရ စိတ်တူ သဘောတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအကြား လိင်တူ ဆက်ဆံမှုကို ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်သော နိုင်ငံများမှာ ၇၃ နိုင်ငံရှိပြီး အများစုမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်တို့မှ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ LGBTI အဖွဲ့ (ILGA) ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံတော်က ကမကထပြုသည့် လိင်တူဆက်ဆံမှုမုန်းတီး ဆန့်ကျင်ခြင်း အစီရင်ခံစာအရ လိင်တူဆက်ဆံမှုအား သေဒဏ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံပေါင်းမှာ လောလောဆယ်တွင် ၈ နိုင်ငံရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတို့မှာ အီရန်၊ ဆူဒန်၊ ဆော်ဒီကရေးဗီးယား၊ ယီမင်၊ ဆိုမာလီယာ အစိတ်အပိုင်း အချို့၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် အီရတ်တွင်မူ နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နယ်စားပယ်စားများက ယင်းသေဒဏ်ကို အသုံးချစီရင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မော်ရီတေးနီးယား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စ တန်၊ ကာတာနှင့် အာရပ်ပြည်ထောင်စု စော်ဘွားများ နိုင်ငံတို့တွင်မူ ရှာရီယာဥပဒေဖြင့် သီအိုရီအရသေဒဏ် စီရင်နိုင်သော်လည်း လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ပုံမရကြောင်း အထက်ပါအစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၆ နိုင်ငံတွင်မူ လိင်တူဆက်ဆံမှုအတွက် ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များမှာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှသည် တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိရှိကြောင်းILGA အစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ထိုသို့သော ပြစ်မှုအတွက် အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက်အတွက် ၁၈၆၀ ပြည့်နှစ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ-၃၇၇ အရ သဘာဝ မဟုတ်သော၊ မဖွယ်မရာအပြုအမူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဥပဒေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင် သွေးသားဆန္ဒအရ သဘာဝ နှင့်ဆန့်ကျင်သည့် ကာမ စပ်ယှက်မှုဟု သတ်မှတ်ကာ ပြစ်ဒဏ်မှာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်နှင့် ငွေဒဏ်မှသည် နယ်နှင် ဒဏ် (တစ်ကျွန်းပို့ဒဏ်)အထိ ရှိသည်။
ကမ္ဘာတစ်လွှား နိုင်ငံအများအပြားတွင် LGBTI ဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြ ရသည်။ ဤခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှာ ယင်းတို့၏ လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု (သူတို့စုံမက်နှစ်သက်သူ)၊ ဖို/မ သရုပ် သကန် (ဇီဝဗေဒအရ သူတို့၏ ပင်ကိုယ်နှင့် မဆိုင်ဘဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မည်သို့သတ်မှတ်ခံယူပုံ)၊ ဖို/မ သွင်ပြင်ပုံပန်း သဏ္ဌာန်(အဝတ်အစား၊ ဆံပင် သို့မဟုတ် မိတ်ကပ်များမှတစ်ဆင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖော်ပြချက်)နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားလက္ခဏာ (သူတို့၏ လိင်အင်္ဂါ၊ ခရိုမိုဆုမ်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါ သို့မဟုတ် ဟော်မုန်းရေချိန်)တို့တွင် အခြေခံဖြစ် ပေါ်နိုင်ပေသည်။
နာမည်ခေါ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှသည် အလုပ်အကိုင်နှင့် သင့်တော်သော ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုများ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းအထိ ယင်းတို့ရင်ဆိုင်ရ သော မညီမျှသည့် ဆက်ဆံရေးအမျိုးမျိုးမှာ ကျယ်ပြန့် များပြားလှကာ ထိခိုက်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့မှာ အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပေသည်။ အလွန်များပြားလှသော အမှုကိစ္စများတွင် LGBTI ဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပေါ်တွင် ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခံရခြင်း၊ အရိုက်အနှက်ခံရခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသတ်ခံရခြင်းကိုပင် ရင်ဆိုင်ကြုံ တွေ့နေကြရသည်။ လိင်ပြောင်းရပ်တည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွင်း အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၃၆၉ ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှား လိင်တူဆက်ဆံသူများမှာ ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များသော၊ လုံးဝမလိုအပ်သည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို မလုပ်လုပ်အောင် ဖိအားသုံးခိုင်း စေခံခဲ့ကြရသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် LGBTI များအား ဦးတည်သည့် ရန်လိုမုန်းထားမှုသည် ယင်းတို့ကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုပေးသင့်သည့် အစိုးရများကိုယ်၌က ဆွပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၊ ချေချင်းညာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သော နိုင်ငံတော်က ကမကထလုပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုက ဂေးများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရာအချို့မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခံရရုံမက အသတ်ပင်ခံခဲ့ရလေသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလည်း LGBTI အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှာ တောခုတ်ဓားများ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ၏ သေသည်ထိခုတ် သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရတို့မှာ သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုအတွက် တရားမျှတမှုရရှိစေ ရေးတွင် စိတ်ဝင်စားဟန် အနည်းငယ်သာ ပြခဲ့လေသည်။ ဆဟာရ သဲကန္တာရအောက်ပိုင်း အာဖရိကတိုက် အစိတ်အပိုင်းအများအပြားတွင်လည်း LGBTI များမှာ ယင်းတို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ တိုက်ခိုက်ခံရမည်၊ သတ်ဖြတ်မှုပင်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စွာ ဆက်လက်နေထိုင်နေကြရသည်။
LGBTI အရေးဆော်သြသူများမှာ စိန်ခေါ်မှုကြီးပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြရပြီး LGBTI များ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများအား ဖော်ထုတ်ရန်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကိုပင် စွန့်လွှတ်စွန့်စားကာ ယင်းတို့အပေါ် ခွဲခြားကျင့်သုံးသော ဥပဒေများအား ပြောင်းလဲအောင် အားထုတ်ကြရသည်။ LGBTI များမှာလည်း အလုပ်ခွင်အတွင်း အခွင့်အရေး၊ ကွဲပြားစုံလင်မှုနှင့် တန်းတူညီမှုများ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် မဟာမိတ်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်း လှုပ်ရှားနေကြရသည်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းတကြွ်ကလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့အစည်းများ၏ စုပေါင်းအားထုတ်မှုကား စစ်မှန် သော အကျိုးအမြတ်ရလဒ်များအရ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် အနည်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်း ၄၃ နိုင်ငံက လိင်တူ ဆက်ဆံသူမုန်းတီးကြောက်ရွံ့မှုအခြေခံသည့် ရာဇဝတ်မှုများအား အမုန်းတရား ရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရပေပြီ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင်မူ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံက လိင်တူလက်ထပ်မှုကို တရားဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
လိင်တူဆက်ဆံမှုကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်သင့်ခံသင့်/ မခံသင့်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း LGBTI အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ တိုးပွားလာခဲ့သည့်အတွက် LGBT တို့အပေါ် စာနာ နားလည်မှုများ တိုးပွားလာပြီး LGBTI အခွင့်အရေးများတိုးတက်ရရှိလာခဲ့သည်ဆိုသော်ငြား လိင်တူဆက်ဆံမှုကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်သင့်ခံသင့်၊ မခံသင့်ဆိုသည့် အခြေခံကျသော မေးခွန်းကို နိုင်ငံအလိုက် တုံ့ပြန်ဖြေဆိုရာတွင် မူ ၂၀ဝ၇ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း သိသိ သာသာတိုးတက်လာသည်ကို မတွေ့ရဘဲ အချို့နိုင်ငံများတွင် ပိုမိုလျော့ကျ လာသည်ကိုပင် တွေ့မြင်ရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Pew Research Center က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၃၉ နိုင်ငံတွင် ဖြန့်ကျက်ကောက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းတစ်ခုအရ လိင်တူဆက်ဆံမှုကို မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံအများအပြား က အကျယ်တစ်ပြန့် လက်သင့်ခံသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း အာဖရိကရှိ မူဆလင်နိုင်ငံအများစု၊ အာရှ၏ အစိတ် အပိုင်းအချို့နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့တွင် တူညီစွာပင် အကျယ်တစ်ပြန့်ငြင်းပယ်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပြန်သည်။ အစ္စရေး၊ ပိုလန်နှင့်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတို့တွင်မူ လက်သင့်ခံမှု/မခံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားအမြင်မှာ ကွဲပြားနေပေသည်။
စစ်တမ်းက ပြဆိုနေသည်မှာ လူတို့၏ ဘဝများအတွင်း ဘာသာရေးက အချက်အချာမကျသည့် နိုင်ငံများ တွင် လိင်တူဆက်ဆံမှုအား လက်သင့်ခံမှုမှာ ထူး ထူးခြားခြားများပြားနေပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများတွင် လည်း အနှံ့အပြားရှိနေသည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှု အဆင့်မြင့်မားသည့် ပိုမိုဆင်းရဲသော နိုင်ငံ များတွင်မူ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လိင်တူဆက်ဆံမှုကို လက်သင့်ခံသင့်သည်ဟု ယုံကြည်ယူဆသူမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
အသက်အရွယ်ကလည်း နိုင်ငံအများအပြားတွင် အဓိကစကားပြောသည်။ ငယ်ရွယ်သူတို့က ကြီးရင့် သူတို့ ထက် လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ် သည်းခံသည့်အမြင် ပိုရှိကြသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းရှိ လူငယ်များက အသက် ၃၀ မှ ၄၉ နှစ်အတွင်းရှိ လူလတ်များထက်လည်းကောင်း၊ အသက် ၃၀ မှ ၄၉ နှစ်အတွင်းရှိ လူလတ်များက အသက် ၅၀ နှင့်အထက် လူကြီးများထက်လည်းကောင်း လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ် သည်းခံသည့်အမြင် ပိုမိုများပြား သည်။
လိင်အရဆိုပါက ယောကျာ်းများထက် မိန်းမများ က လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ် လက်ခံနိုင်စွမ်းပိုမိုသည်ကို တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံအများစုရှိ ယောကျာ်းနှင့် မိန်းမတို့အကြား လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ်အမြင်မှာ သိသိသာသာ မကွဲပြားလှသော်လည်း ဖို/မ ကွာဟမှုရှိသော နိုင်ငံများတွင်မူ မိန်းမများက ယောကျာ်းတို့ထက် လိင်တူဆက်ဆံမှု ကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံသင့်ကြောင်း ပြောဆို မှု သိသိသာသာပိုမိုသည်။ နိုင်ငံအရပြောရလျှင် ဂျပန်၊ ဗင်နီဇွဲ လားနှင့် ဂရိတို့တွင် အမျိုးသမီး ၁၀ ယောက် တွင် ၆ ယောက်က လိင်တူဆက်ဆံမှုကို လက်သင့်ခံသင့်သည်ဟုဆို သည်။ ဂျပန်တွင် မိန်းမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် ဂရိတို့တွင် ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းက လက်ခံ သည့်အမြင်ရှိပြီး ယောကျာ်းများအနေဖြင့် ဂျပန်တွင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗင်နီဇွဲလားတွင် ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဂရိတွင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြသည်။ အစ္စရေး တွင် မိန်းမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းက အပြုသဘောမြင်ကြပြီး ယောကျာ်း ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ကသာ ထိုသို့ အမြင်ရှိကြသည်။ ဗြိတိန်၊ ချီလီ၊ ပြင်သစ်နှင့်အမေရိကန် ပြည် ထောင်စုတွင် မိန်းမ၊ ယောကျာ်း အများစုက လက်ခံကြောင်းဆိုကြသော်လည်း ထိုအထဲတွင် မိန်းမများက ယောကျာ်းများထက်အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ် အမြင်ကွဲပြားမှုပြဇယား ကို တစ်ဖက်ကော်လံတွင် ဖော်ပြထားသည်။)
ကမ္ဘာ့ LGBT ဦးရေခန့်မှန်းချက်
စင်စစ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ LGBT အရေအတွက်ကို အတိအကျသိရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ချေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဇယားတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကမ္ဘာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင် လက်ရှိလွှမ်းမိုးနေဆဲ လူနေမှုစနစ်၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာပေါင်းစုံတွင် မိမိကိုယ်ကို LGBT ပါဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝံ့သူ အရေ အတွက်မှာ လွန်စွာအကန့်အသတ်ကြီးပါ သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို လူတို့က အတိအကျပြောကြားပေး မည့် ကာလာတစ်ခုမှာ မည်သည့်အခါမှာမှ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ဟု ပင် ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့တစေ စစ်တမ်းများ လေ့လာချက်များမှာ ကမ္ဘာ့ LGBT ဦးရေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင် အတိုင်းအတာတစ်စုအထိမူ အထောက် အကူပြုနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားစီးပွားရေးသုတေသနဌာန (National Bureau of Economic Research) ၏ လေ့လာချက်အရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မိမိနှင့်မျိုးတူ လိင်အပေါ် စိတ်ဝင်စားတပ်မက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟုဆို သည်။ ဤသည်မှာ ယခင်လေ့လာချက်များက ခန့်မှန်းတွက်ချက်သည့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ နှစ်ဆနီးပါးဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂေါလပ် (Gallup) စစ်တမ်းအရ အရွယ်ရောက်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့၏ ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း မှာ LGBT များဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် အမျိုးသားက ၃.၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိ၍ အမျိုးသမီးက ၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Williams Institute ၏ စစ်တမ်းတွင် အမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူများ၏ ဝ.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လိင်ပြောင်းရပ်တည်သူများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဥရောပလူဦးရေ၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ LGBT များဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ LGBT အချိုးအစားမှာ ကျား- ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မ ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိကာ ဂျပန်တွင် ၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ဤတွင် UNAIDS ၏ ခန့်မှန်းချက်များထက် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အပလီကေးရှင်းများ၏ အကူအညီဖြင့် ခန့် မှန်းချက်များမှာ အဆမတန်ပိုများနေတတ်သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေဆိုသူမှာ နိုင်ငံ အလိုက်အနည်းအများကွာခြားက အမည်ထုတ်ဖော်မပြောလိုသူများနှင့် ဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်သူများ လည်းရှိကြရာ ဖေ့(စ်)ဘုတ် အသုံးပြုခန့်မှန်းမှုကြောင့် မိမိ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ဖို/မ သရုပ် သကန်ကို ပိုမိုပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများ အများအပြားထွက်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုသည်။
ဥပမာပြရလျှင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် UNAIDS ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် လိင်စုံ ဆက်ဆံသူ အမျိုးသားအရေအတွက်မှာ ၄,၅၀၃,ဝ၈၀ ရှိသော်လည်း Facebook ၏ ခန့်မှန်းချက်တွင်မူ လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားသည့် အမျိုးသားအရေအတွက် ၁၇çဝ၀ဝçဝ၀ဝ နှင့် လိင်တူရောလိင်ကွဲပါ စိတ်ဝင်စားသည့် အမျိုးသား အရေအတွက်မှာ ၁,၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ရှိ ကြောင်း သိရှိရရာ ကွာခြားချက်အလွန်အမင်းကြီးမားကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အလားတူအခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ယင်းတို့ခန့်မှန်းချက်နှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်များမှာ အလွန်ကြီးမားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ သည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားအင်တာနက် အသုံးပြုမှုမှာ နိစ္စဓူဝသဘောဆောင်သည်ထက်ဆောင်လာပေရာ အွန်လိုင်း နယ်ပယ်များမှာ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားမှု၊ ပြုမှုလုပ် ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူရေး အတွက် အရေးပါသောနည်းလမ်းတစ်သွယ်ဖြစ်လာ သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ထိုသူများမှာ အင်တာနက်အသုံးပြု မှုများသူဖြစ်ပြီး အဖော်ရှာရာနှင့် ချိန်းဆိုတွေ့ ဆုံရာ နယ်ပယ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြရာ အချက်အလက် ကောက်ယူ ရေးအတွက်အရေးပါသကဲ့သို့ HIV ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေးအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေသည်။
LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် အလားအလာ
သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွင် လိင်တူဆက်ဆံရေးအမှုကိစ္စနှင့် လိင်တူမေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်မှုတို့အား လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ နှိပ်ကွပ်သည် ဖြစ်စေ ထိုသို့သော ဆက်ဆံရေးများရှိခဲ့ကြောင်း အထောက် အထားအထင်အရှားရှိခဲ့သည်ဟု သမိုင်းပညာရှင်အများစုက သဘောကိုက်ညီကြသည်။ ဤယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွင် လည်း ယနေ့ LGBT အဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားသောသူတို့အား အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရရှိရေးနှင့် ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးအတွက် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်နေ သော လူမှုလှုပ်ရှားမှုများမှာ ဘုရားကျောင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ဆေးဘက် ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့၏ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်ကွပ်မှုအား တုံ့ပြန်ဆန့်ကျင်မှုများအဖြစ် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများ သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲတွင် စွဲမြဲပြီးသော ဖို/မ ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုတို့မှာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ရိုးရာအစဉ်အလာဓလေ့ထုံးစံများ၏ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ၁၈ရာစု နှင့် ၁၉ ရာစု ကာလသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးတော်လှန်မှုများ မတိုင်မီကမူ ဤအရေးအတွက် စုစည်း ဆောင်ရွက်ကြသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အင်အားရင်းမြစ် များမှာ လွန်စွာနည်းပါးခဲ့သည်။ သို့သော် လူထု မီဒီယာတိုးတက်ကြီးထွားလာမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစံများက အလွှာပေါင်းစုံမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားအတူတကွ စုစည်းပေးခဲ့ရာ စာနာထောက်ထားသော ဆေး ပညာလေ့လာချက်များ၊ တားမြစ်ထားသော စာပေအရေးအသားများ၊ လိင်မှုသုတေသနနှင့် ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ကြီးထွားမှု ဥတုရာသီတစ်ခုတို့မှ ခွန်အားသတ္တိများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုတွင်မူ အမျိုးသမီးတန်းတူရေးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကွဲပြားခြားနားမှုဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒတို့၏ အားပေးကူညီမှု ဖြင့် Gay များ၊ Lesbian များ၏ အသိအမှတ်ပြုခံရရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ သို့နှင့် လိင်တူ ကြောက်ရွံ့မှု ဆန့်ကျင်ရေးသီအိုရီများ အရှိန်ရလာလေသည်။ ၂၁ ရာစု အစပိုင်းကာလများတွင်မူ လိင်တူလက်ထပ်ခွင့် ကိုပင် တရားဝင်အသိအမှတ်သော နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများထဲတွင် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသမှ နယူးဇီလန်နှင့် သြစတြေးလျားနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ သာ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း LGBT အခွင့်အရေးများ ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှုရှိခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာ့ အစိတ်အပိုင်းအချို့၌သာဖြစ်သည်။ ကျန်ကမ္ဘာ့နေရာအများအပြားတွင်မူ LGBT တို့မှာ အနှံ့အပြားကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုနှင့် ဖိစီးနှိပ်ကွပ်မှုများကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံ နေရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အလားတူအံ့သြလောက်စရာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရေအတွက် အများစုတွင် လိင်တူဆက်ဆံမှု အတွက် ပြစ်ဒဏ်မှာ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် သေဒဏ်ပင် ထိုက်နေသေးတော့သည်။ ထို့ပြင် LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာ ရှေ့အနာဂတ်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင်နှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။
ယနေ့ရရှိထားသော အရှိန်အဟုန်ကို LGBT များ ရှေ့ရင်ဆိုင်ရဦးမည့် ပြဿနာအများအပြားကို အောင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်ရေးသာမက LGBT များအတွက် ဥပဒေအခွင့်အရေးနှင့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု အရှိတရားနှစ်ခုလုံး အတွက်ပါ တန်းတူညီမျှရစေရန် လှုမှုရေးစံများ အပေါ် သြဇာသက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် မည်သို့အရင်း အနှီး ပြုသွားမည်နည်း။ LGBT လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့သော ရည်မှန်းချက်သစ်များချမှတ်သွားမည်နည်း၊ လှုပ်ရှားမှု၏ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များကား ဘယ်သူတွေနည်း။
LGBT လှုပ်ရှားမှု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ဤလမ်းဆုံလမ်းခွက ယင်း၏လတ်တလောဦးစားပေးများနှင့် အနာဂတ်ဦးတည်ရာတို့အကြားမှ တင်းမာမှုကို ထင် ဟပ်ဖော်ပြနေပေသည်။ အမေရိကကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုးမှာပင် စစ်တပ်နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဟူသော အစဉ် အလာအကျဆုံး အစုအစည်းနှစ်ခုသို့ တူညီမျှတမှုရနိုင်၊ ရောက်နိုင် အောင် မူဝါဒအပြောင်းအလဲ၌ မဟာဗျူဟာ ကျကျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့မှုကြောင့်ပင် ဤလှုပ်ရှားမှုသည် မကြာသေးမီက အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ြွူွှ များ အသိအမှတ်ပြုခံရရေးနှင့် ပါဝင်ရေးထက် ပို၍၊ ဤအစုအစည်း ဆိုင်ရာအတားအဆီးများအား ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းမှာ ပြောင်းလဲနေသော လူမှုရေးစံများဆီသို့ ပေါက်ရောက်ရာအရေး ပါသော လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သော လူထုအနေဖြင့် ထိမ်းမြား လက်ထပ်မှုကို ယင်း၏ သင်္ကေတများ၊ စနစ်ကျသော အကျိုးတရားများနှင့်အတူ တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ယင်းတို့ထောက်ခံမှုပြု နိုင်သော လိင်တူဆက်ဆံသူများအလိုကျ မူဝါဒအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်စေကာမူ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုမှာ အထူးသဖြင့် LGBT မဟုတ်သူ မဟာမိတ်များအဖွဲ့ LGBT အားလုံးအတွက် အပြည့်အဝလက်သင့်ခံမှုနှင့် မျှတသော ဆက်ဆံမှုကို အာမခံသည့် အခြားအရေးကြီးကိစ္စများအား ပယ်ဖျက်ရန် ခြိမ်းခြောက်သည့် လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် သတ်မှတ်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု တန်းတူခွင့်ရ လိုက်ခြင်းမှာ အဖိနှိပ်ခံအစုများအခွင့်အရေး ကို ပြေလည်စေသာ အခြားတစ်ခုချင်းပြဿနာများကဲ့သို့ သော အခြား အရေးပါသည့် အရေးအရာများကို ဘေးဖယ်ပစ်ရာကျနိုင်သည့်အပြင် မျိုးဆက်ပွားခွင့်နှင့် လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှ ခွင့်ကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများမှာလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားကာ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်မှတန်ပြန်ဗျူဟာသစ်များနှင့် တိုက်ခိုက် မှုကို ခံလာရနိုင်ပေသည်။ ဤ အချက်အားလုံးက ခက်ခက်ခဲခဲလုံးပမ်းတိုက်ခိုက်ရယူ ခဲ့ရသော ယနေ့တိုးတက်မှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားစေနိုင်သည်ဟု ထောက်ပြမှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
LGBT များနှင့် အလုပ်အကိုင်ပြဿနာ
ကမ္ဘာတစ်လွှား LGBT များမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု၊ ဖို/မ သရုပ်သကန်၊ အသွင်အပြင်နှင့် လိင် ထူးခြားလက္ခဏာရပ်များအပေါ်မူတည်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် တို့၏ စူးစမ်းလေ့လာမှုအရ သိရသည်။ အထူးသဖြင့် အာရှဒေသရှိ အလုပ်ခွင်များအတွင်း LGBT များ၏ အတွေ့အကြုံများမှာ အများအားဖြင့် ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိကြောင်း ယင်းတို့က ဆိုပါသည်။ LGBT များမှာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေစဉ်မှစ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
လေ့လာချက်အရ တရုတ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများမှ LGBT များသည် အလုပ်ခေါ်စာတွင် ယင်းတို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင် ထုတ်ပယ်ထားခံရကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင်များမှ ငြင်းပယ်ခံနေရကြောင်း၊ တစ်ဖန် အလုပ်ရလျှင်လည်း အလုပ်ခွင်တွင် ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုများ၊ အနိုင်ကျင့်မှုများနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုအဖြစ်မျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဖြစ်ပျက် လေ့ရှိပြီး မကြာသေးမီလများအတွင်း ထိုသို့သော အလုပ် ခွင်တွင်း အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် LGBT လူငယ်တစ်ဦးမှာ မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်သွားမည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ သည်။ အာရှနိုင်ငံအများစုတွင် LGBT ကို ဥပဒေအရ တရားဝင်မသတ်မှတ်သည့် လိင်တူဆက်ဆံမှုကို ရာဇဝတ်မှု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် LGBT များမှာ ဥပဒေအကာအကွယ်များလည်း ကင်းမဲ့နေကြသည်။
ထိုနိုင်ငံများတွင် LGBT များအပေါ် အပျက်သဘောဆက်ဆံမှု သုံးမျိုးတွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ LGBT များကို ရယ်စရာသဘောထား၍ လှောင်ပြောင် သရော်ခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ြွူွှ များနှင့် ပတ် သက်၍ အတင်းပြောခြင်း၊ ကောလာဟလ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် LGBT များ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အမူအယာနှင့် စကားပြောပုံ အပေါ် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှုကဆိုသည်။ ယင်းတို့၏ အနေအထားနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပွင့်လင်းသော LGBT များ အထူးသဖြင့် Trans များမှာ ယင်းတို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု၊ ဖို/မ သရုပ်သကန်နှင့် အသွင်အပြင် သို့မဟုတ် လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအနေအထားကြောင့် ယင်းတို့အလုပ်လုပ်ရာ အစိုးရဌာနများအတွင်း အကြီးအကျယ်ခွဲခြားဆက်ခံကြရပြီး နိုင်ငံစုံ ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ် သည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မူ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလျော့နည်းကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအနေဖြင့် LGBT များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံ၊ အနိုင်ကျင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ၊ လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးရန်၊ တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံဖြေရှင်းပေးရန်၊ တရားဝင် မူဝါဒ များချမှတ်ပေးရန်၊ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရားများနှင့် ြွူွှ အလုပ်သမားများအားတန်းတူ ညီမျှဆက်ဆံ ရေး၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း လေ့လာချက်တွင် အကြံပြုထား သည်။
LGBT များမှာ ပင်ကိုယ်သဘာဝအရ နေထိုင်ဆက်ဆံသူ အရေအတွက်နှင့်စာလျှင် လူနည်းစုများသာ ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့၏ ဖြစ်တည်မှုမှာ ငြင်းပယ်၍ မရသော လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာ တစ်ရပ်ဖြစ်နေပေပြီ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားနိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ ၏ သီးခြားလက္ခဏာများအရ ထိုပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူနည်းစုအရေးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်သွားနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
1) The Global Divide or Homosexuality, PEW,June 4,2013.
2) LGBTI PEOPLE AND EMPLOYMENT,UNDP and ILO.
3) LGBTI RIGHTS by Ammesty International, Human Rights Watch.
4) At the Crossrouds: The Future of the LGBT Movement, Bullding Movement Project.
5) Population Size Estimation of Gay and Bisexual Men Using Social Media-Based